एकपटकको लगानीले जीवनभर बाँच्ने सीप , मासिक कमाइ डेढ लाखसम्म ! | Rock Star News Online
Home बिबिध एकपटकको लगानीले जीवनभर बाँच्ने सीप , मासिक कमाइ डेढ लाखसम्म !
एकपटकको लगानीले जीवनभर बाँच्ने सीप , मासिक कमाइ डेढ लाखसम्म !
इटहरीमा कपाल कटाइमा सक्रिय प्रेम केसी, अम्बिका तामाङ र प्रेम अधिकारी आफूहरूको सीप स्वदेश र विदेश दुवैतिर बिक्ने बताउँछन्। आफूले नेपालमा अरूकहाँ काम गरे पनि मासिक ६० हजार कमाउन सक्ने बताउँछन् प्रेम केसी। उनी भन्छन्, ‘व्यवसायी करण काम गर्नेहरूलाई पैसा तिर्न मान्छे हिचकिचाउँदैनन्। त्यसैले काम र कमाइको समस्या सीप भएकाहरूलाई हुँदैन।’ आफूले आफंै सलोन नखोलेर विदेशमा गए पनि राम्रो कमाइ हुने केसी बताउँछन्।अम्बिका तामाङ पनि आफ्नो सीप स्वदेश र विदेश दुवैमा बिक्ने भएकोमा खुसी छिन्।
‘बरु यहाँ विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएकाहरूसँग के कस्तो काम गर्ने टुंगो हुँदैन’, तामाङ भन्छिन्, ‘यो सीप भने नेपाल र विदेश जहाँ पनि बिक्छ।’ आफूले हाल मासिक थोरैमा १८ हजार कमाएको बताउने तामाङ आपंmैले खोल्दा वा विदेशमा जाँदा कमाइ झनै धेरै हुने बताउँछिन्। धरानका प्रेम अधिकारी कपालको कामले आफूलाई धेरै आत्मविश्वास दिएको बताउँछन्। पढाइ पूरा नगरेकाले विदेश जान घरबाट दबाब आएको तर अहिले सीपले त्यो कुरा हराएको अधिकारीले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पढाइ नहुँदा पनि सीप हुँदा गरिखान सकिन्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु।’
आफूले कोठाको सुविधासहित ग्राहकबाट आएको पैसाको ५० प्रतिशतको सहमतिमा काम गरेको बताउँदै अधिकारीले आफ्नो कमाइ २० हजार हाराहारी हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘यत्तिको कमाइ गर्न धेरै पढेकाहरूलाई पनि समस्या नै छ।’ आफूले विदेश नगएर यही सीपलाई थप व्यवस्थित गर्न सोचेको अधिकारीले बताए। औसतमा नेपाली कपालको काम गर्नेहरूको तलब दस हजार देखि डेढ लाखसम्म हुने केसी बताउँछन्। केसीका अनुसार वेसिक गरेकाहरूलाई दस हजार, डिप्लोमा गरेकालाई १८ माथि र डिग्री गरेर अनुभव लिएकालाई ६० हजार हाराहारी र विज्ञ भएकालाई डेढ लाख सम्मको मासिक कमाइ हुन्छ।
नेपालीहरूको बढ्दो आम्दानी र व्यवसायिक कपाल कटाइको सोखको कारण नेपाली मार्केट अझै भर्जिन भएको प्रेम अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारतबाट आएका धेरै छन्। उनीहरूको स्थान नेपाली आफैंले लिन सक्ने ठूलो बजार छ।’ भारतीयहरूले पा रिवारिक रूपमा मात्रै सीप सिक्ने भएकाले व्यावसायिक सीप सिकेका नेपालीलाई अवसर भएको अम्बिका तामाङ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘पहिलेपहिलो हामी आउनुअगाडि भारतीयको सलोनमा जानेहरू अहिले हाम्रा नियमित ग्राहक हुनुहुन्छ।
स्टाइल र सरसफाइ मा हामी व्यावसायिक भएको उहाँहरू बताउनुहुन्छ।’ व्यावसायिक रूपमा कपालको काम गर्नलाई धेरै सजिलो भएको प्रेम केसी बताउँछन्। केसीका अनुसार ३५ हजार हाराहारीमा बेसिक कोर्स र डिप्लोमा गर्न सकिन्छ। थप केही लाख रकमले विदेशबाट डिग्री गर्न सकिने उनी बताउँछन्। विदेश जान मेनपावरलाई दिने एकदेखि डेढ लाखले त एक जना राम्रो हेयर आर्टिस्ट बन्ने र जीवनभर कमाइ गर्ने केसीको भनाइ छ।‘मेनपावरलाई दिने पैसा त अर्को पटक अर्को देश जाँदा फेरि दिनुपर्छ। तर, यो क्षेत्रमा गरेको लगानी सधैंका लागि हुन्छ’, इटहरीमा तालिम दिँदै आएका अधिकारी भन्छन्, ‘यो सीप विश्वभर काम लाग्छ।’